Backpacking Atụmatụ N'ihi ejegharị On Ụgbọ oloko | Save A Train
Home > Travel Europe > Backpacking Atụmatụ N'ihi ejegharị On Ụgbọ oloko
Backpacking bụ otu n'ime ndị kasị akpali akpali ụzọ njem, na ezi ihe kpatara. The nnwere onwe nke na-enwe ihe niile i nwere gị azụ na hopping si ụgbọ okporo ígwè na-azụ na mba bụ ihe ịrịba ahụmahụ. Ebe ọ bụ na a na-ewu nnọọ ewu, anyị chere na anyị ga-enye gị ụfọdụ njem backpacking Atụmatụ maka njem na ụgbọ oloko.
Let’s start with where we recommend you go before we give you our Backpacking Atụmatụ maka njem na ụgbọ oloko.
njem aro 1: London ka Amsterdam
Duration: 23 ụbọchị
lineup: Rome, Viareggio (Tuscany), Venice, Vienna, Budapest, Kraków, Prague, Berlin, Amsterdam, eji, London
njem Aro 2: London ka Istanbul
Duration: 25 ụbọchị
lineup: London, Paris, Lausanne, Zermatt, Chur, Munich, Salzburg, Vienna, Budapest, Sighisoara, Brasov, Bucharest, Veliko Tarnovo, Sofia, Plovdiv, Istanbul
Nsoro Isi: eiffel Tower, Luxembourg Gardens, Lake Geneva, Swiss Alps, Neuschwanstein Castle, Dachau, Buda Castle, thermal baths na Budapest, The Black Church, na Obí nke nzuko omeiwu, Church nke Ọmụmụ Kraịst, Alexander Nevski ụka, Ukwu Bazaar, St. Sophia.
Zurich ka Lausanne Ụgbọ oloko
Geneva ka Lausanne Ụgbọ oloko
Bern ka Lausanne Ụgbọ oloko
Lucerne ka Lausanne Ụgbọ oloko
Anyị 1st ghota maka backpacking Atụmatụ: Pack Light!
Mgbe echiche nke lugging ukwuu na gị onwe gị na azụ adịghị ada ụda na-adọrọ adọrọ, ọ dị mfe na agafe mkpọ mgbe ị na-na-enwe obi ụtọ banyere gị na njem! Firstly, sị ha nke ọma na akpa ihe na-aga nweta azụmazụ dị mma nke ahụ kechiri n'úkwù gị maka nkwado. mgbe mbukota, jụọ onwe gị: 'M na- n'ezie mkpa a?'Ọ bụrụ na azịza ya bụ mba, okporo mmiri ya! Ọbụna ka mma ma ọ bụrụ na i nwere ike na-agba ọsọ na ala steepụ a ugboro ole na ole - nke a ga-enye gị ihe na-egosi otú ị ga-jikwaa ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ mbubreyo maka a ụgbọ okporo ígwè na-mkpa na-agba ọsọ enwetaghị ya!
NDỤMỌDỤ 2: mee Ihe Okporo ígwè Planner ngwa ezigbo enyi gị.
Nke a ngwa Downloads niile ụgbọ okporo ígwè schedules jidesie gị ekwentị nke mere na ị nwere ike ịnweta ha offline na dị mkpa ka gị backpacking Atụmatụ! It’s perfect for planning your trips while you’re on the go and enjoying your time in a new, mba ọzọ ebe. Ọzọkwa, ngwa-enye gị ohere ka iyo gị okporo ígwè nhọrọ dabeere kpọmkwem njikọ naanị, ụgbọ oloko na-enweghị a na-amanye ịrụ ndoputa, na-azụ na a ịnyịnya ígwè e ji ebu ihe. Ọ bụ ezie na anyị agaghị atụ aro na-ewere a ígwè na a backpacking njem!
Dortmund na Frankfurt Ụgbọ oloko
Nuremberg na Frankfurt Ụgbọ oloko
Stuttgart na Frankfurt Ụgbọ oloko
Bonn na Frankfurt Ụgbọ oloko
NDỤMỌDỤ 3: Ekwela mix elu spontaneity na a na-ahazighị ahazi!
The dum n'ókè nke backpacking Atụmatụ bụ nwere nnwere onwe na-eme njem ngwa ngwa, ejighị ya kpọrọ, na ọkacha mma na-enweghị a na-elekọta na ụwa! Ọ bụrụ na ị kwụsị elu ịzụ a okporo ígwè ngafe, ị ga-azọpụta ego, ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche gị ụgbọ okporo, ọ nwere ike na-amalite na-pricey. Ya mere, whey ihe ị chọrọ ime na-enye onwe gị a ngosi ego nke oge na-eme ya. Ịzụ tiketi n'ọdịnihu ga-azọpụta gị ego ma ọ ga-amachi gị mgbanwe.
Cologne na Nuremberg Ụgbọ oloko
Munich na Nuremberg Ụgbọ oloko
Stuttgart na Nuremberg Ụgbọ oloko
Dortmund na Nuremberg Ụgbọ oloko
NDỤMỌDỤ 4: Ikpeazụ backpacking Atụmatụ – Buru a akọrọ ụzọ sọks nso n'aka
The kasị mma njem backpacking Atụmatụ-abịa site n'ahụmahụ onwe onye. Ọ dịghị ihe na-emebi a ụbọchị dị ka mmiri sọks, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-akpa na-eje ije anya. Iji tinye ịkparị mmerụ, nke abụọ kasị njọ ihe na-eme na-enweghị ike ọbụna na-ahụ na sọks mgbe ị chọsiri ha! Nke a na-agwụ elu unpacking a re-mbukota. Ihe ọ dịghị onye chọrọ ime! Ma ndapụta na-adịghị fun, wee na-a akọrọ ụzọ na a n'akpa uwe nso n'elu nke gị akpa. nke ahụ ụzọ, ma ọ bụrụ na ị na-eme na-eje ije n'aka na ibu ndoro mmiri na uro, gị ngwọta bụ nso n'aka.
To get the best train experience when backpacking, na mma ahịa na-enweghị ntinye akwụkwọ ụgwọ, were Save A Train, Echefula na-ebipụta anyị njem backpacking Atụmatụ tupu ị zụọ njem.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-backpacking-tips%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#Backpacking #BackpackingTips europeantravel europetravel longtrainjourneys ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem